Iran : Mitokona tsy mihinan-kanina ireo gadra politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Aogositra 2010 20:18 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, srpski, Deutsch, македонски, বাংলা, Português, Español, Français, English
Gadra politika 17 no nanomboka nitokona tsy nihinan-kanina tamin'ny faran'ny volana jolay hanamelohan'izy ireo ny fitondrana ratsy mihatra aminy ao amin'ny fonjan'ny Evin. Eto ny lisitra misy ny anaran'ireo mitokona. Iran dia nisambotra mpanao gazety aman-jatony maro, mpitolona ho an'ny zon'olombelona ary mpanao politika nanohitra ny vokam-pifidianana izay ho filoham-pirenena tamin'ny volana jona 2009.
Mir Hussein Mousavi sy Mehdi Karoubi, mpitarika ambony ao amin'ny antoko mpanohitra no niantso ireo gadra hampitsahatra ny fitokonany tsy mihinan-kanina. Milaza ireo mpitoraka bilaogy iraniana fa i Babak Bordbar, mpanao gazety mpaka sary nigadra sy nitokona tsy nihinan-kanina no navoaka ny fonja androany.
Fikambanana miaro ny zon'olombelona maro samy hafa no nanambara ny ahiahiny mikasika ny fahasalaman'ireto gadra mitokona tsy mihinan-kanina ireto, indrindra fa ilay mpanao gazety Bahman Ahmadi-Amouei sy Keyvon Samimi, ary ilay mpianatra Majid Tavakoli . Ireto olona telo farany nanomboka ny fitokonana tsy mihinan-kanina “maina” hatramin'ny 04 aogositra.
Sight manoratra [fa] mikasika ny tsy fitoviana misy eo amin'izao tontolo izao manoloana ireto gadra mitokona tsy mihinan-kanina any Iran ireto. Manoratra ny mpitoraka bilaogy:
Fa nisy inona? Malefaka ve ny feon'ny gadra politika sa matory izao tontolo izao?… Bahman Ahmadi-Amouei sy Keyvon Samimi dia olona mpiray tanindrazana amiko ary vaky ny taolany nandritra ny fitondrana Velyateh Faghie's [Fitondrana iraniana] miafina
23 Khordad, antoko nitaky ny fiforonany taorian'ny fifidianana filoham-pirenena, manohana ny Green Movement (Hetsika Maitso) , milaza[fa] fa:
Voakasiky ny fahasalaman'ny gadra politika mitokona tsy mihinan-kanina isika, ary hajaintsika ny safidiny na hanohy izy na hijanona. Kanefa jereo koa ny fanasana ataon'ny antoko mpanavao, Jebhey Moshrekat, izay niantso ny vahoaka hanao fitokonana politika hanohanana ireto gadra. Ekena ny fitokonana tsy mihinan-kanina fa tsy ekena ny fitokonana politika. Ahoana koa ity antoko mpanavao ity no mitady hanome loko politika avy amin'ny fitokonana tsy mihinan-kanina.
Arash Ashouri, mpitoraka bilaogy mpaka sary iraniana monina any Iran, manoratra ao amin'ny bilaoginy, Kosoof, mikasika ny anankiray amin'ireto mpitokona tsy mihinan-kanina:
Bahman Ahmadi Amouee, mpanao gazety ekonomika mahafatra-po ao amin'ny gazety maro no mitokona tsy mihinan-kanina ankehitriny ao amin'ny misy azy ao amin'ny Fonjaben'i Evin ao Téhéran. Bahman, niaraka tamin'ny vadiny, Jila Baniyaghoub, mpanao gazety sady mpiaro ny zon'ny vehivavy, no nosamborina taorian'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2009. Napetraka irery tao amin'ny fonja an'olon-tokana 209 ao amin'ny fonjaben'i Evin nandritra ny herinandro maromaro ary tsy nisy ny zavatra tena nanamelohana azy ofisialy. Farany, voaheloka 7 taona sy 4 volana an-tranomaizina izy ary nokapohina in-34 tao amin'ny kianjan'ny revolisiona.
Bahman Ahmadi Amouee, miaraka amin'ny gadra politika 16 hafa mitokona tsy mihinan-kanina ao amin'ny fonjan'i Evin , manohitra ny fitondrana tsy mendrika hatao aminy ao amin'ny faritra 350 ao amin'ny fonja sy ny fahasiahan'ireo mpiambina ny fonja. Tsy avelan'ny manam-pahefana hitsidika azy ny fianakaviany sady tsy mahazo mifandray aminy mihitsy ary araka ny voalazan'ny loharanom-baovao avy ao anatin'ny fonja ihany dia efa atahorana ny fahasalamany.